LAYAAB: Jose Mourinho Oo Cristiano Ronaldo Oo Saddexley Dhaliyay Ku Dhex Dilay Qolka Labiska Real Madrid Iyo Emmanuel Adebayor Oo Xog Qarsoonayd Shaaciyay. - Gool24.Net
Xidigihii hore ee kooxda Real Madrid ee Emmanuel Adebayor ayaa shaaci yay qaabkii axmaqnimada lahayd ee uu Jose Mourinho ula dhaqmi jiray ciyaartoyda kooxdiisii hore ee Real Madrid, wuxuuna sheegay In Mourinho uu Cristaino Ronaldo oo saddexley goolal ah dhaliyay uu qolka labiska Madrid ku dhex dilay.
Emmanuel Adebayor oo waqtigii uu Jose Mourinho qabtay shaqada Real Madrid qayb ka ahaa Los Blancos ayaa ka sheekeeyay qaabkii uu Mourinho wax walba u burburin jiray waqtiga nasashada ee kulamada iyaga oo xataa ay arimahani dhacayeen waqti ay Madrid ilaa saddex gool hogaanka ku haysay waqtigii nasashada.
Emmanuel Adebayor ayaa kadib ka baxay Real Madrid wuxuuna isku maray kooxo badan oo ay Arsenal, Man City iyo Tottenham ka mid ahayeen isaga oo waqtigiisii ugu fiicnaa ku qaatay Arsenal wuxuuna waraysi dheer oo uu bixiyay ku faah faahiyay xaaladii qolka labiska ee Real Madrid.
Emmanuel Adebayor oo ka sheekaynaya wixii uu Mourinho ka samayn jiray qolka labiska kooxdiisii hore ee Real Madrid ayaa yidhi: “Real dhexdeeda, waxaanu ahayn kuwo waqtigii nasashada 3-0 ku guulaysanayay. Isaga (Murinho) ayaa qolka labiska soo galay wuxuuna noqday mid waalan. Waxa uu laagay qaboojiyaha, waxa uu laagay Tv-ga, waxa uu tuuray biyihii”.
Intaa kadib Emmanuel Adebayor ayaa sii sharaxay wixii uu Jose Mourinho ku sameeyay ciyaartoydii Madrid oo uu Ronaldo ku jiro wuxuuna yidhi: “Qof kastaba wuu dilay isagu. Waxaan xusuustaa waqti uu isagu dilay Ronaldo kadib markii uu saddexley dhaliyay. Waxa uu isaga ku yidhi: ‘Qof kastaaba waxa uu sheegayaa in aad aduunyada ugu fiican tahay, si xun ayaanad u ciyaaraysaa. I tus aniga in aad tahay ka ugu fiican!”.
Emmanuel Adebayor oo ka hadlaya wixii uu Ronaldo sameeyay ayaa yidhi: “Cristiano wuu qaatay iyada. Ronaldo waxa uu dhalin karayay saddexley laakiin waxa uu ka hadlayay midii uu lumiyay”.
Dhinaca kale Emmanuel Adebayor ayaa ka hadlay tababarkii uu Ronaldo kula samayn jiray kooxdii ay ka wada tirsanaayeen ee Real Madrid wuxuuna yidhi: “Waxa uu anaga Real Madrid noogula tababaran jiray sidii uu carruurtiisa la tababraanayo. Dhabarkiisa ayuu ku bixin jiray oo uu qoortiisa ku maamuli jiray. Mar ayuu shan ilbidhqisi kubbada ku hayay hal taabasho, siday xataa taasi suurtogal u tahay?”.
Laakiin Emmanuel Adebayor ayaa sheegay in isaga iyo Sergio Ramos ay goobta jidh dhiska ee Gym-ka ku ahaayeen kuwa ugu awooda badan wuxuuna yidhi: “Jidhiska dhexdiisa-wow. Aniga iyo Sergio Ramos ayaa ahayn kuwa ugu xooganaa, kadib waxaa yimid Roanldo-waad ogtahay in ay taasi adag tahay.